Dowladda Afghanistan oo xukunka ku wareejinaysa Ururka Taliban – Idil News
Dowladda Afghanistan oo xukunka ku wareejinaysa Ururka Taliban
Wasiirka Arrimaha Gudaha Afghanistan Abdul Sattar Mirzakwal ayaa maanta sheegay in “xukunka si nabad ah loogu wareejin doono” dowlad ku-meel gaar ah kadib markii Taliban ay amartay dagaal-yahanadeeda inay u sugaan gelitaanka magaalada caasimadda ah ee Kabul.
“Shacabka Afghanistan yeysan walaacin, ma jiri doono weerar lagu soo qaado magaalada, waxaa jiri doona in xukunka si nabdoon loogu wareejiyo dowlad ku-meel gaar ah,” ayuu yiri.
Ali Ahmed Jalali, oo ah aqoonyahan fadhigiisu yahay Mareykanka, horeyna u ahaa wasiirka arrimaha gudaha, ayey u badan tahay inuu hoggaamiyo maamulka ku-meel gaarka ah, sida ay ilo-wareedyo diblomaasi u sheegeen Reuters.
Dhinaca kale, madaxweyne Ashraf Ghani ayaa ciidamada dowladda ugu baaqay inay sugaan amniga magaalada Kabul.
“Waa mas’uuliyaddeena, waxaana u sameyn doonnaa sida ugu wanaagsan. cid kasta oo ka fakareysa qas ama raadineysa bililiqo waxaa lagula macaamili doonaa awood,” ayuu ku yiri muuqaal uu soo duubay.
AFP, AP, REUTERS, VOA